Sekuphinde kwashona elinye iphoyisa lishayiswa yimoto | News24
Sekuphinde kwashona elinye iphoyisa lishayiswa yimoto
Johannesburg - Kuphinde kwashona elinye iphoyisa ngemuva kokushayiswa yimoto eSchomanskloof eMpumalanga ngoLwesihlanu, kusho uMnyango wezokuPhepha koMphakathi esifundazweni.
Lesi sigameko senzeke kungakapheli nesonto amaphoyisa amabili kaMasipala waseGoli eshonile ngemuva kokushayiswa yimoto ebihamba umshayeli obedakiwe kunezivimbamgwaqo.
Ekhuluma ngesigameko sangoLwesihlanu, okhulumela uMnyango wezokuPhepha koMphakathi uMoeti Mmusi uthe: "UVincent Ngomane ushonele esibhedlela ngemuva kokushayiswa yimoto ekuseni ku-N4 Toll Road eSchomanskloof ngaseMontros.
“Ingozi yenzeke ngesikhathi iphoyisa ebelisebenza limisa imoto ebomvu yohlobo lwe-Audi, ngokuphazima kweso kwaqhamuka enye imoto yohlobo lwe-Chevrolet Aveo igijima yashayisa eye-Audi, yaphenduka khona emgwaqeni kwashayiseka nephoyisa.”
OLUNYE UDABA: Kuboshwe ababili ngelokubulawa kwemantshi
Iphoyisa lilimale kabi, laphuthunyiswa eNelspruit Medi-Clinic ngendiza enophephela emhlane.
"Ngokuhamba kwesikhathi lishonile. Umshayeli wemoto ebigijima uthole ukulimala okungatheni, wangeniswa eMedic Clinic‚" kusho uMmusi.
UNgomane ubesanda kuklonyeliswa nguNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi ngomsebenzi omuhle awenze ngesikhathi samaholidi.